Network Professional Access Control Attendance Integrated Fingerprint, Access Control Attendance Fingerprint, Access Control Attendance Time Fingerprint, Network ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးအချိန်တက်ရောက်ပေါင်းစည်းလက်ဗွေ
ဇီဝဗေဒ Access Control Attendance Fingerprint, Access Control Attendance Time Fingerprint, Network Access Control Attendance Integrated Fingerprint, Network ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးအချိန်တက်ရောက်ပေါင်းစည်းလက်ဗွေ, Network Professional Access Control Attendance Integrated Fingerprint, Network Professional Access Control Machine, Network Professional Access Control Time Attendance Integrated Fingerprint
ဆက်သွယ်ရေး mode ကို: RS485, TCP / IP, ယူအက်စ်ဘီ, ဦး-disk
verification: လက်ဗွေ, RFID IC / ID ကိုကတ်များ, စကားဝှက်များ, စသည်တို့ကို.
မှတ်ဉာဏ်: 32M / 64M / 128M လျှပ်တစ်ပြက်မီး
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Linux ကို operating system
အဆိုပါ algorithm ကို၏ဗားရှင်း: ကြည့်ရှုခြင်း 15.2 အဓိကနည်းပညာ
ပြသ: TFT 2.8 လက်မ
အရှိန်: 0.6 စက္ကန့်
အမှားနှုနျး: ထက်ငယ်သော 0.0001%
ငြင်းပယ်ခံရမှုနှုန်း: ထက်ငယ်သော 0.01%
Wiegand: အတွက် wiegand ထွက် wiegand
သံလိုက် function ကို: စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲ
အချိန်အပိုင်းဖွင့်လှစ်: 50 အချိန်ဇုန်,10 အချိန်အုပ်စုများ,5 ပွင့်လင်းအုပ်စုများ
machine language: machine language: ဘာသာပေါင်းစုံဘာသာစကားများ (အင်္ဂလိပ်, ရိုးရှင်းသောတရုတ်, တရုတ်ရိုးရာ, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ထိုင်း, အင်ဒိုနီးရှား, ဗီယက်နမ်လူမျိုး, စပိန်, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ, ဂျာမန်, ရုရှား, တူရကီ, အီတလီ, ခကျြခကျြ, Arabic အဘိဓါန်, ရှ optional ကို)
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အရွယ်အစား: 220 (ရှည်လျားသော)80 × (ကျယ်ဝန်းသော)26 × (ထူသော) (မီလီမီတာ)
လူပျိုအထုပ်အရွယ်အစား: 250 (ရှည်လျားသော)140 × (ကျယ်ဝန်းသော)53 × (ထူသော) (မီလီမီတာ)
လူပျိုအလေးချိန်: 457.5, G
FCL အရေအတွက်: 30 အစုံ
ကွန်တိန်နာအရွယ်အစား: 470 (L ကို)383 × (အကျယ်)420 × (ထူသော) (မီလီမီတာ)
မှတ်စု: the above specifications are based on the actual product. Due to the continuous renewal of the product, the Seabreeze Smart Card Co.,Ltd does not promise the actual product to be consistent with the data. At the same time, the Seabreeze Smart Card Co.,Ltd does not bear any disputes arising from the discrepancy between the actual technology and the publicity materials, and no changes will be made in advance.
prev: ရိုးရှင်းသောလက်ဗွေ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးစက်, လက်ဗွေ + ID ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး, Wiegand26 လက်ဗွေ ID ကိုကတ် Reader ကို
နောက်တစ်ခု: လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကိုလက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကို Proximity ကတ်လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, အဘယ်သူမျှမဝါယာကြိုးလိုအပ်ပါသည်